Xanuunka garabka (Xanuunka Garabka) | Sababta, Baadhista, Jimicsiyada, Daaweynta
Xanuunka garabka (Xanuunka Garabka)
Ma adag tahay inaad gacmahaaga kor u qaaddo dhererka garabkaaga? Xanuun gudaha garabka markaad gacmahaaga kor ugu qaaddo dhinaca?
Xanuunka garabka iyo garabka ayaa xanuun noqon kara oo ka gudbi kara dhaqdhaqaaqa, iyo sidoo kale tayada noloshaada. Sababtoo ah isku xirnaanta garbaha ee tooska qoorta iyo garbaha, mid ayaa sidoo kale arka xiriir toos ah oo u dhexeeya xanuunka garabka iyo dhacdooyinka qoorta oo kordha - oo ay ku jiraan madax xanuun qoorta ah.
Maqaalkan, waxaan kaa caawin doonaa inaad fahanto xanuunka garabkaaga - oo kuu iftiimiya waxa ay noqon doonto nidaamka ugu fiican ee aad ugu laaban karto nolol maalmeedkaaga bilaa xanuun iyo xaddidaad.
Waxaan sidoo kale rabnaa inaan xusno in sababaha ugu badan ee xanuunka garabka ay sabab u yihiin murqaha iyo kala goysyada - taas oo, iyo waxyaabo kale, u horseedi kara cillad maskaxeed. Tan waxaa wax ku ool ah ku daaweyn kara dhaqtarka jimicsiga jirka ama lafopractor casri ah.
Qodobkaan waxaa ka mid ah:
Jimicsi Jimicsi Leh Jimicsiga Garka (Intro)
Is-daaweynta ee Xanuunka Garabka
Astaamaha iyo Calaamadaha Clinical ee Xanuunka Garabka
Sababaha iyo Cilladaha Xanuunka ee Cagaha
Sawirka Baadhista Xanuunka Garabka
Daaweynta Xanuunka ee Garbaha
Jimicsiga iyo Jimicsiga Xanuunka Garabka
Hoos ka dhaadhac si aad u aragto laba fiidiyowyo tababar oo leh leylis wanaagsan kaas oo kaa caawin kara inaad la dagaasho xanuunka garabkaaga.
VIDEO: 5 Jimicsi Xoog ah Oo Looga Soo Horjeedo Xanuunka Tendonitis ee Garka
Dhaawacyada Tendon iyo xanuunka loo yaqaan 'tendonitis' ayaa ah labada sababood ee ugu badan ee xanuunka garabka. Tababbarka gaarka ah ee laastikada waxaa loo adeegsadaa ka hortagga iyo dhaqan celinta baaritaannada noocaas ah - waxay si gaar ah waxtar u leedahay tan iyo markii laastikku ka dhigayo iska caabbinta go'doominta kooxaha muruqyada qaarkood iyo lifaaqyada jilibka. Hoos guji si aad u aragto barnaamijka tababarka.
Ku soo biir qoyskeena oo iska qor kanaalkeena YouTube talo bixin jimicsi bilaash ah, barnaamijyo jimicsi iyo aqoon caafimaad. Ku soo dhawow!
VIDEO: 6 Layli Oo Ka Soo Horjeeda Cudurka Garabka ee Osteoarthritis
Cudurka osteoarthritis wuxuu ku lug leeyahay jajabka carjawda iyo farqiga wadajirka ah ee garabka. Dabcan, tani waa wax aan rabno inaan ka hortagno. Hoos waxaa ku yaal lix layli oo wax ku ool ah oo loo isticmaali karo cudurkan.
Miyaad ka heshay fiidiyowyada? Hadaad ka faaiidaystaan, runti waxaan kugu mahadnaqaynaa inaad iska qoratay kanaalkayaga YouTube-ka oo aad na siisay suul ku saabsan warbaahinta bulshada. Micno weyn ayey noo leedahay. Mahadsanid!
Sidoo kale aqri: Tan Waa Inaad Ka Ogaato Osteoarthritis of the Garabka
Sidoo kale aqri: 8 Jimicsi loogu talagalay Xanuunka Garabka
Xanuunka garabka ayaa sababi kara astaamo kala duwan iyo furuuruc caafimaad, laakiin astaamaha ugu caansan waxaa ka mid ah:
Midkaasi kama shaqeyn karo gacmaha korkiisa garabka
Dhaqdhaqaaqa garabka oo la yareeyay
Xanuun garabka markaad gacmaha kor u qaadayso dhinaca ama toos u jeedi
Cadaadiska cadaadiska markaad taabato muruqyada ay saameeyeen, muruqyada iyo kala goysyada
Xanuun gudaha garabka ah (xanuunka wuxuu dareemayaa inuu yahay gudaha garabka garbaha)
Kordhinta xanuunka qoorta iyo madax xanuun qoorta
Dhakhtarka ruqsada haysta ee sida sharciga ah loo yaqaan (sida caadiga ah jimicsiga jimicsiga ama kalkaaliyaha loo yaqaan 'chiropractor casri') ayaa kaa caawin kara baaritaanka iyo baarista sababta garabkaaga xanuun garabka. Waxyaabaha kale, waxay awood u yeelan doonaan inay baaraan:
Tijaabinta dhaqdhaqaaqa garabka dhaqdhaqaaqa.
Baadhitaanno caafimaad oo lagu baadho clamping syndrome.
Tijaabada muruqyada si loo ogaado muruqyada ku lug leh
Baadhitaanka wadajirka waxqabadka iyo haddii ay jiraan aagag aan dhaqaaqayn sidii ay ahayd.
Baaritaan noocan oo kale ah ayaa aasaas u noqon doona ogaanshaha iyo qaabka qorshaha daaweynta.
Sababaha Caadiga ah iyo Cudurrada Gaarka ah ee Lugaha
Sababaha ugu badan ee xanuunka garabka waxaa laga helaa murqaha iyo kala goysyada. Xilliga dheer ee khaldan ee kuwan ka dib waxay u horseedi kartaa dhaqdhaqaaqa wadajirka oo yaraada, oo ay ku jiraan qoorta adag iyo lafdhabarta wadnaha iyo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah - oo si fiican loo yaqaan muruqyada murqaha ama myalgias
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr sababood oo kale oo suurtagal ah iyo baaritaanno aan dib ugu eegi karno liiska hoose.
Osteoarthritis iyo arthritis-ka garabka
Arthralgia waxay sababi kartaa calcification (garabka lime), burburka guska iyo arthritis (arthritis) garabka dhexdiisa. Isbedelada wadajirka ah ee noocan oo kale ah waxay si dabiici ah u sababi karaan isku-dhafka garabka in uusan si sax ah u dhaqaaqin dhaq-dhaqaaqaana uu yaraado. Cudurka ogaanshaha wuxuu kaloo bixin karaa aasaaska xanuunka hore iyo kan dambe labadaba.
Clamping Syndrome (Cudurka Dareenka)
Xaaladaha kacsan ee garabka gudahiisa waxay cadaadis ku saari karaan muruqyada maxalliga ah, suedeyaasha iyo / ama dareemayaasha. Markay tani dhacdo, ogaanshaha cudurka waxaa loo yaqaannaa isku-xoqitaanka cilladda - sidoo kale loo yaqaan 'impingement syndrome'. Isku-xoqidda noocan oo kale ah waxay u horseedi kartaa fiiqan, mindi garaacista garabka dhaqdhaqaaqyo gaar ah iyo dareen xanuun joogto ah oo garabka ka jira.
Calaamadaha ayaa dabcan waxay kuxiran yihiin dhismayaasha la xiray iyo heerka ay ku xayiran yihiin. Tusaale ahaan, xidid dareemayaasha oo xanniban waxay sababi karaan kabuubyo iyo shucaac xanuun ku dhaca gacanta, sidoo kale waxay si weyn u kordhin karaan xiisadda murqaha ee maxalliga ah. Sidoo kale dabeecadda ayaa xannuun u keenta markay seexanayso garbaha lugta ku leh.
Dhibaatooyinka Murqaha iyo Faraha
Sidii aan soo sheegnay, muruqyada, muruqyada iyo kala-goysyada ayaa ka mid ah sababaha ugu badan ee labadaba muddada-gaaban iyo xanuunka muddada dheer garabka. Yaraynta dhaqdhaqaaqa wadajirka ah ee qoorta iyo feeraha ayaa ah labo sababood oo caadi ah oo culeyska garabka u noqdo mid sii badan oo hal dhinac ah. Waqti dheeri, tani waxay u kortaa si tartiib tartiib ah unugyada muruqyada ku xiran iyo carada xanaaqa-unugyada jilicsan.
Daaweynta jireed ee muruqyada iyo kala-goysyadu waxay kaa caawin karaan inaad caadi u noqoto shaqada xumaanta noocaas ah. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa isticmaalka joogtada ah ee tababarka laastikada (sida lagu muujiyey fiidiyowyada kore).
Kabaha barafoobay (Cahesul Capsulite ee Wadajirka Garka)
Garabka barafoobay waxaa keena barar ku dhaca isku-darka garabka (capsulite). Xaaladda badanaa waxay dhacdaa ka dib muddo xanuun badan oo u horseeday inaanan garabka wax badan dhaqaajin - ama qalliinka garabka ka dib. Baadhitaanku wuxuu maraa saddex waji oo kala duwan:
Marxaladda Koowaad ee Jiilaal barafoobay: Wejiga koowaad wuxuu ku lug leeyahay adkaansho xanuun, xanuun badanaa. Xanuunku had iyo jeer wuu ka sii darayaa si la mid ah dhaqdhaqaaqa waa la xaddiday. Marxaladani waxay soconaysaa illaa 5-6 toddobaad (daaweyn) ama illaa sagaal bilood (oo aan la daweynin iyo laylisyada guriga).
Wejiga Labaad ee Furuqa barafoobay: Marxaladan, socodka ayaa si weyn hoos loogu dhigay, laakiin xanuunka ayaa fiicnaa. Marxaladani waxay socon kartaa 2 ilaa 6 bilood. Mar labaad, waxaan ku nuuxnuuxsaneynaa in xaaladdani tahay mid si damiir leh loola dhaqmi karo isla markaana mid lagu dardargelin karo hagaajinta isticmaalka maalinlaha ah ee jimicsiga jimicsiga iyo daaweynta jireed ee toddobaadlaha ah.
Wejiga Saddexaad ee Jiilaal barafoobay: Marxaladdan waxaa sidoo kale loo yaqaannaa marxaladda "dhalaalidda". Sababtoo ah xaqiiqda ah in dhaqdhaqaaqa si tartiib tartiib ah loo hagaajiyay oo aad dareemi karto in shaqadu ay soo laabanayso marba marka ka dambaysa. Wejiga ugu dambeeya wuxuu socon karaa wadar ahaan afar bilood ilaa laba sano.
Daweynta mowjadaha cadaadiska, abaabulka garabka iyo jimicsiyada guriga ayaa xaalada ka dhigaya mid aad uga dhakhso badan marka la daweeyo. Ka gaabinta inaad sidaa sameyso waxay qaadan kartaa hal ilaa labo sano garbahaaga inay soo kabato.
Cudurka 'Rheumatic Arthritis' ee garabka
Cudurka 'rheumatic arthritis' waa nooc gaar ah oo rheumatism-ka kaas oo kala-goysyadu u jajabayaan sababta oo ah nidaamka difaaca jirka ee jirkiisa ku weeraraya laabatooyinka. Tani waxay u horseedaa qallooc (inta badan gacmaha aad ayey uga muuqataa - sida Jan Teigen oo kale) iyo tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ah oo ku dhaca kala-goysyada. Xaaladdu waxay u baahan tahay daaweynta daroogada iyo jimicsi jimicsi oo joogto ah, iyo sidoo kale jimicsi.
Dhaawaca Tendon ama jeex jeexan garabka
Dhaawaca lugta ee garbaha waxaa loo yaqaanaa 'tendinosis'. Cudurka loo yaqaan 'tendonitis' ayaa loo yaqaan 'tendinitis'. Labada shuruudood waxaa badanaa sababa culeys xad dhaaf ah ama culeys xad dhaaf ah taas oo keentay in microtrauma ku dhacdo fiilooyinka. Baaritaannada waxaa lagu daaweyn karaa si qarsoodi ah iyadoo la adeegsanayo jimicsiga garabka, daaweynta jirka iyo suurtagalnimada sidoo kale mowjadda cadaadiska.
Gaar ahaan, muruqyada infraspinatus iyo supraspinatus waxaa saameeya dhaawacyada lugta.
Kala-baxa Garbaha (Garabka oo laga baxo wadajirka)
Ka saarista garabkaaga kala-goysyada ayaa loo dejiyayaa sida mid ka mid ah xanuunkii ugu xumaa ee aad la kulanto - waana taas sababta dad badani u suuxaan haddii ay taasi dhacdo. Tani sidoo kale waa sababta oo ah qaabdhismeedyada, oo ay ku jiraan dareemayaasha, way isqabooqi karaan marka garabka ka baxo laabatooyinka. Garabka waa in kaliya ay ku soo celiyaan goobta shaqaalaha caafimaadka.
Subakromial Mucosal Inflammation (Garabka Garabka Ilmaha)
Garabka hortiisa waxaan ku leenahay aag la yiraahdo subacromialis - yacni ka hooseeya kala-goysyada 'acromion'. Xuubka dheecaanka xasaasiga ahi wuxuu caadi ahaan keenaa casaanka maqaarka, barar iyo xanuun weyn, xanuun badan marka la taabto hore ee garabka. Xaaladda waxaa lagu daaweyn karaa daaweyn muxaafid ah - laakiin xaaladaha qaarkood, daawooyinka anti-bararka ayaa loo baahan yahay (gaar ahaan dadka leh nidaamyada difaaca jirka oo yaraaday).
Sawirka Baadhista iyo Baadhista Xanuunka Garabka
Caadi ahaan, sawirka looma baahna in lagu sameeyo ogaanshaha garabka, laakiin xaaladaha qaarkood waa lagu tilmaami karaa caafimaad ahaan. Hoos waxaa ku yaal tusaalooyin sida baaritaanka MRI iyo qaababka kale ee baarista sawirku ay gacan uga geysan karaan samaynta ogaanshaha saxda ah.
Muuqaalka: Garabka MR (Sahanka MRI Caadi ah)
Sharaxaada MRI: «» R: Ma jiraan wax cudur ahaan loo xaqiijiyay. Ma jiraan natiijooyin. "
Sharaxaad: Tani waa halabuurka sawirrada baaritaanka MRI ee garabka caadiga ah iyada oo aan la helin natiijooyinka MRI. Garabka ayaa xannuunsanayay, laakiin ma jirin wax dhaawacyo ah oo ka muuqday sawirrada - mar dambe ayay noqotay in xanuunku ka yimid xannibaadaha wadajirka ah ee qoorta iyo laabta, iyo sidoo kale muruqyo firfircoon oo firfircoon myalgias murqaha wareega - dabinka sare, rhomboidus iyo scapula levator.
Xalku wuxuu ahaa xasilinta tababbarka loo yaqaan Rotator cuff, hagaajinta wadajirka 'chiropractic', daaweynta muruqyada iyo layliyo gaar ah oo guriga lagu sameeyo. Waad ku mahadsantahay inaad nala wadaagto sawirada noocaas ah. Sawirada waa qarsoodi.
MRI Muuqaalka garabka (qaybta axalka)
MRI garabka, jeexitaanka axial - Sawirka Wikimedia
Sharraxaadda MR sawir: Halkan waxaad ku arkeysaa MRI garabka garabka ah, oo ku jira qaybta faasaska. Sawirka waxaan ku aragnaa muruqa infraspinatus, scapula, muruqyada 'subcapularis', muruqa 'serratus anterior', glenoid, 'pectoralis muruqa yar', muruqa weyn ee 'pectoralis', muruqa 'coracobrachialis', 'labrum' hore, madaxa gaaban ee biceps tendon, muruqa 'deltoid', madaxa dheer ee jilibka biceps , murqaha deltoid, madaxa humerus, teres yar yar iyo labrum dambe.
MRI sawirka garabka (qaybta coronal)
MRI garabka, goynta coronal - Photo Wikimedia
Sharaxa Muuqaalka MR: Halkan waxaad ku aragtaa MRI caadi ah oo garabka ah, oo ku jira goynta coronal. Sawirka waxaan ku aragnaa murqaha waaweyn, murqaha latissimus dorsi, halbowlaha hoose, murqaha hoosta, glenoid, artiska suprascapular iyo dareemaha suprascapular, muruqyada trapezius, clavicle, labrum sare, madaxa humerus, muruqyada caloosha, muruqyada hoose, iyo halyeeyada aaska.
Sharaxa sawir-garabka garabka: Halkan waxaan ku aragnaa muuqaal laga soo qaaday gadaal (gadaal ilaa gadaal).
Baadhitaan ku ogaanshaha ultrasound-ka garabka
Sharaxa ah ee muuqaalka baaritaanka ultrasound ee garabka: Sawirkaan waxaan ku aragnaa baaritaan ultrasound ah oo garaaca garabka. Sawirka waxaan ku aragnaa goobta sawirka.
Sifeynta sawirka CT ee garabka: Sawirka waxaan ku aragnaa wadajirka garabka caadiga ah.
Daaweynta Xanuunka ee Garka
Daaweynta xanuunka garabka ayaa caadi ahaan ka koobnaan doona shaqada muruqyada, abaabul wada jir ah iyo tilmaamo ku habboon jimicsiga guriga. Daaweynta waxaa sameeya xirfadlayaal caafimaad oo rasmi ah oo loo oggol yahay oo leh khibrad muruqyada iyo kala-goysyada - saddexda xirfadood ee leh khibradan iyo oggolaanshahan waxaa ka mid ah jimicsiga jirka, lafopractor iyo daaweeyaha gacanta.
Magacyadan xirfadeed ee la ilaaliyo waxay sidoo kale badanaa u isticmaalaan daweynta cirbadda xididka wadnaha iyo daaweynta mawjada cadaadiska si kor loogu qaado natiijooyinka bukaanka iyo hagaajinta.
Jimicsiga jimicsiga jirka ee loo yaqaan "Jilibka"
Dhakhtarka jimicsiga jimicsiga ayaa kaa caawin kara inaad wax ka qabato murqaha kacsan, dhaawacyada lugaha iyo shaqada garabka oo hoos loo dhigo. Tan waxaa loo sameeyaa, iyo waxyaabo kale, iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka murqaha iyo layliyo la waafajiyey.
Chiropractic Casri ah oo Looga Soo Horjeedo Garbaha Xun
Dhakhtarka loo yaqaan 'chiropractor' casri ah wuxuu leeyahay 6 sano oo waxbarasho wuxuuna daweeyaa murqaha, lugaha iyo kala goysyada. Waxbarashadooda dheer iyo tan dheer waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo ku xeel dheer qiimeynta iyo daaweynta dhibaatooyinka muruqyada oo dhan - oo ay ku jiraan cilladaha muruqyada, muruqyada, kala-goysyada iyo neerfaha.
Daaweyntu badanaa waxay ka kooban tahay abaabul wada jir ah oo loo habeeyay inay caadi u noqoto dhaqdhaqaaqa wadajirka ah, daaweynta muruqyada garaacista muruqyada adag iyo abaabulka garabka si loo sii daayo booska garabka. Garaacista garabka qaarkood ayaa lagu daweeyaa daaweynta mawjadaha cadaadiska daawada ama daaweynta acupuncture intramuscular acupuncture ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Cadaadiska mawjadaha cadaadiska ee garabka
Waxaa jira dhowr baaritaan oo garabka ah oo si gaar ah uga jawaabaya daaweynta mawjada cadaadiska togan. Kani waa nooc ka mid ah daaweynta oo aan si adag kuugula talineyno inaad ka hesho kaliya takhtar caafimaad oo leh cinwaan la ilaaliyo (chiropractor, physiotherapist ama therapist manual).
Baadhitaanku wuxuu muujiyey saamayn wanaagsan oo wanaagsan oo ku saabsan garabka lime, dhaawaca tendon iyo caabuqa lugta. Farsamaynta daaweyntu waxay ku shaqeysaa cadaadiska cadaadiska sababa waxyeelada yar ee la xakameeyo ee meelaha la dhaawacay, sidaa darteed jabinta unugyada dhaawaca una qasbay habka bogsashada dabiiciga.
Tijaabooyin tijaabo ah oo la xakameeyay ayaa muujisay in daaweynta mawjadaha cadaadiska ay sidoo kale waxtar u leedahay dhaawacyada garabka ee dabadheeraad ah ee ay ku jiraan calcification calcation (Cacchio et al., 2006).
Sidoo kale aqri: Miyaad isku dayday Daaweynta Cadaadiska Cadaadiska cadaadiska?
Jimicsiyada iyo Tababbarka Xanuunka Garabka
Ma keenay labada fiidiyow ee tababarka bilowga maqaalka? Haddii kale, kor u rog oo isku day kuwaan. Halkaas waxaad sidoo kale ka heli doontaa xiriiriye kanaalkayaga Youtube oo ay ku jiraan dhowr barnaamijyo jimicsi oo wanaagsan oo garbahaaga ah. Tani waa sababta oo ah jimicsiga iyo jimicsiga ayaa lagama maarmaan u ah ilaalinta shaqada wanaagsan iyo dhaqdhaqaaqa garabka aan xanuun lahayn.
Halkan waxaad sidoo kale ku aragtaa dulmari guud iyo liis layliyada aan ku daabacnay ee la xiriira ka hortagga, ka hortagga iyo ka bogsashada xanuunka garabka, xanuunka garabka, garabka barafeysan, dhaawaca garabka iyo baaritaannada kale ee la xiriira.
Guudmarka - Jimicsi iyo jimicsi loogu talagalay garabka xanuun iyo garabka xanuun:
5 jimicsi yoga ah oo loogu talagalay xanuunka garabka
7 layli oo loogu talagalay murqaha garabka adag oo deggan oo xasilloon
Jimicsi laabta iyo inta u dhexeysa garbaha garbaha
Tixraacyada iyo ilaha
NHI - Xogta Caafimaadka ee Noorway.
Xiin, G. Maareynta xanuunka loo yaqaan 'chiropractic management' ee garabka xanuunka iyo cillad la'aanta asal ahaan myofascial iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka isugeynta ischemic. J Can Chiropr Assoc 2002; 46 (3).
Cacchio, A. Saameynta daaweynta shucaaca-shucaaca shucaaca ee loo yaqaan 'calcific tendinitis' ee garabka: indhoole-indhoole ah, daraasad kiliinikada la soocay. Jirka. 2006 Meey; 86 (5): 672-82.
Punnett, L. iyo al. Qaab-dhismeedka Fikradda ah Is-dhexgalka Isududbinta Caafimaadka Goobta Shaqada iyo Barnaamijyada Ergonomics Shaqo. Rep. Caafimaadka Dadweynaha , 2009; 124 (Suppl 1): 16-25.
Su'aalaha badanaa la is weydiiyo ee ku saabsan xanuunka garabka
Waxaa i xanuunaya garabka iyo gacanta kore oo dareemeysa xanuun ilko. Maxaa sababi kara?
Xanuunka labada garabka iyo gacanta kore waxaa sababi kara xanaaq dareemayaasha aagga aan ugu magacdarnay brachial plexus ama qoorta. Tan waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay murqaha dhagan, xannibaadaha wadajirka ah iyo muruqyada daciifka ah iyo shaqada wadajirka ah ee garabka iyo qoorta.
Garba xanuun garabkaaga midig oo aan dareemo inuu qoorta ka imaanayo. Tani run ma noqon kartaa?
Haa, xanuunka garabka ayaa badanaa ah mid ka dhib badan sida qofku u maleyn lahaa badanaana wuxuu ku lug yeeshaa cillad / nabar dhismayaal dhowr ah oo la xiriira, sida qoorta, garbaha iyo xabadka.
Muruqyada xanuunka u gudbin kara garabka midig ee qoorta waa trapezius dhexe, levator scapula iyo scalenii (wajiga, dhexe iyo kuwa dambe) oo magacyo dhowr ah.
Xaaladda xanaaqa dareemaha ee qaybta hoose ee qoorta, tusaale ahaan qoorta hoose ee vertebrae ee loo yaqaan C5-C6-C7, waxaad sidoo kale la kulmi kartaa cadaadis ama xanuun garabkaaga midig mararka qaarna waxaad hoos ugu sii dhici kartaa gacanta isla qeybtaas.
Caruurta ma dhaawacmi karaan garabka?
Carruurtu sidoo kale waxay ku xanuunsan karaan garabka iyo inta ka hartay nidaamka muruqyada. In kasta oo carruurtu ka dhakhso badan yihiin dadka waaweyn, haddana weli waxay ku dhici karaan cillad xagga kala-goysyada, muruqyada iyo muruqyada ah.
Lug ma dhaawici kartaa haddii neer ku xannibmo dhabarka dambe ee garabka?
Maya, qanjidhada dareemayaasha ee garabka ma u gudbin karaan xanuunka lugaha. Gabi ahaanba ma laha xiriir jidh ahaaneed. Taas bedelkeeda, xanaaqa dareemaha ee garabka ayaa xanuun dareemeyaasha ah ku yeelan kara gacanta sare, xusulka, gacanta, gacanta, gacanta ama faraha.
Garbaha xanuun taabashada? Maxay u xanuun badan tahay?
Haddii aad xanuun ka qabto garabka markaad taabatid markaa tani waxay ku tusaysaa cillad eller dhaawac, iyo Xanuunku waa habka jidku kuu sheego.
Xor ayaad u tahay inaad ogaato haddii aad ku leedahay barar aagga, tijaabada dhiigga (nabarro) iyo wixii la mid ah. U adeegso borotokoolka iling (RICE) haddii ay dhacdo dhicitaan ama dhaawac. Haddii xanuunku sii socdo, waxaan kugula talineynaa inaad booqato rug caafimaad oo lagu baaro iyo daaweyn kasta.
Garbaha xanuun markii wax la qaadayo? Sababta?
Marka kor loo qaadayo, waa wax aan macquul aheyn in aan la isticmaalin garbaha iyo murqaha garbaha. Haddii xanuunku ku kooban yahay garabka, markaa waxaa jira fursad ah inaad leedahay muruq saa'id ah ama nooc kale oo dhaawac ah. Waxaa lagugula talinayaa inaad la tashato dhakhtar si loo baaro.
- Su'aalaha la xiriira jawaabta isla Garbaha xanuun dartiis? Garbaha xanuun markii wax la qaadayo?
Garbaha xanuun ka dib quusin?
Dad aad u tiro badan ayaa arkay xiriirka ka dhexeeya dhuumaha iyo xanuunka garabka. Layli laftiisu wuxuu saarayaa dalabyo aad u sarreeya garbaha iyo murqaha wareega, oo qaladkan si dhakhso leh ayaa loo sameeyaa.
Waxay kaloo noqon kartaa calaamad muujinaysa inaadan tababbaran muruqyada Rotator cuff ku filan. Tani waxay keenaysaa in garabka si aad ah u soo baxo inta lagu gudajiro fulinta dips-yada oo markaa culeys aan xad dhaaf aheyn saarey dhinacyada garbaha. Waxaan kugula talineynaa inaad nasasho nasasho ah ka hesho burooyinka oo aad ku beddesho jimicsi kale.
Garbaha xanuun jimicsiga kadib?
Haddii aad leedahay garabka xanuun jimicsiga ka dib, tani waxay ku imaan kartaa culeys saa'id ah ama rar aan sax ahayn. Badanaa waa murqaha agagaarka garabka wadajirka ah iyo qoorta oo culeys xad dhaaf ah la saaray.
Muruqyada kale ee ay saamayn ku yeelan karto waa wareegtada wareega, triceps, biceps ama scapula levator. Ka naso jimicsiga sababaha keena iyo waxa dhaca midda waxay noqon kartaa talaabooyin ku habboon.
- Su'aalaha la xiriira jawaabta isla Garbaha xanuun ka dib baaskiil wadista? Garbaha xanuun ka dib golf? Garbaha xanuun ka dib tababarka xoogga? Garab xanuun miyaa ka dib barafka waddanka oo dhan? Garbaha xanuun marka jimicsiga gacmaha sare?
Garab xanuun habeenkii. Sababta?
Hal suurtagal oo ah xanuunka garabka habeenkii waa dhaawac muruqyada, jilicsanaanta ama kiishka sinta (akhri: olecranon bursitis). Waxay kaloo noqon kartaa mid dhaawac cadaadis.
Xaaladda xanuunka habeenkii, waxaan kugula talineynaa inaad la tashatid takhtar caafimaad oo aad baartid sababta xanuunkaaga. Ha sugin, la xiriir qof sida ugu dhaqsaha badan, haddii kale waxaad halis u sii xumaan kartaa.
waxyeelladayda wuxuu leeyahay,
15/01/2015 at 11:56
Xasuusnoow: Haddii aad hayso su'aalo aan maqaalku daboolin, waxaad su'aashaada ku weydiin kartaa goobtan faallooyinka (ama boggayaga facebook). Waxaan markaas ku dadaali doonaa inaan kuugu jawaabno 24 saacadood gudahood.
Monika Anita L wuxuu leeyahay,
29/04/2016 at 11:19
Hello. Waxaan ahay naag 37 sano jir ah, waxaana muddo dhowr bilood ah iga dareemay xanuun iyo qallafsanaan garbaha, qoorta, gacmaha, gacmaha, curcurka iyo faraha.
Inta lagu jiro xilliyada ugu xun, aad ayaan uga xanuunsadaa dhabarka garbaha ilaa farahayga. Waxa aad mooddaa in seeduhu ay aad u gaaban yihiin. Lugaha, faraha iyo cududaha hore ee hore ayaa had iyo jeer qallafsan. Si kale ayaan uga xumahay dhammaan jirkayga - gaar ahaan dhabarka. Oo markaan si khafiif ah u cadaadiyo meelo kala duwan, waxaan dareemayaa inay jilicsan tahay waqti dheer ka dib.
Gacanta midig, waxay inta badan dareemaa inaan xidhan yahay galoofyo adag. Farta giraanta ee gacantani aad bay u qallafsan tahay waxayna doorbidi lahayd in la foorarsado. Mararka qaarkood habeenki labada gacmoodba waan caajisaa. Gacmahana waa in lagu dhalaaliyaa biyo diirran si ay u "shaqeeyaan" marka ay qabow tahay dibadda.
Haddii kale, inta badan waxaan qabaa xanuunka tolida ee jirkayga sare. Gaar ahaan garabka midig ee garabka iyo laabta - waxay mararka qaarkood u soo ifbaxdaa gacmaha sidoo kale. Oo waxaa jira qanjaruufo mararka qaarkood. Neefta ayaa i garta markaan dibadda u socdo, jidhkayguna waa i cuslaaday. Daalay Waxa uu leeyahay dheef-shiid kiimikaad hooseeya. Waxaan rajeynayaa inaad ii sheegi karto waxa kani yahay iyo sida loo daweyn karo. Waxaan hayaa shaqo aad u culus. Aad ayaad u mahadsantahay. Salaam. Monika
vondt.net wuxuu leeyahay,
30/04/2016 at 13:31
Dhibaatadaadu waxay u muuqataa mid aad u ballaaran, waxayna u badan tahay inay soo korodhay waqti ka dib - waxay u badan tahay inay la xiriirto shaqada culus ee aad sheegtay (shaqo caynkee ah ayaad haysaa, habka? wax badan oo kor u qaadis ah?). Tani oo ay weheliso dhaqdhaqaaq yar iyo jimicsi aad u yar ayaa laga yaabaa inay keentay in murqaha, kala-goysyada iyo seedaha aysan diyaar u ahayn culeyska jireed ee culus ee shaqadaada - sidaas darteed waxaad heleysaa qaar ka mid ah hababka soo kabashada muruqa ee socda meelaha ay saameeyeen - si kale haddii loo dhigo, markaa jidhkaagu waligii uma soo kaban doono xaaladdii caadiga ahayd. Taas oo kuu keenta in aad maalinta xigta ku bilawdo fiilooyinka murqaha ee daalan (oo ay u badan tahay in dhaq-dhaqaaq xumo ay u badan tahay), taas oo iyaduna keenta xanuunnada labaad ee meelo kale oo jidhka ah.
Miyay ka sii daran tahay garabka midig ee garabka iyo gudaha garabka garabka, waxaad leedahay? Muruqyada garabka oo cidhiidhi ah oo ka soo horjeeda lafta-collar waxay ka xanaajin kartaa neerfaha hoos u gala cududda, dhudhunka, curcurka, curcurka, gacanta iyo faraha. Cilad-sheegid hawleed oo suurtogal ah ee tan waa TOS syndrome (syndrome thoracic outlet syndrome), kaas oo neerfaha brachial plexus ay noqdaan kuwo xanaaqsan sababtoo ah myalgias iyo myoses oo xad dhaaf ah.
Waa in ay xoogaa kugu adag tahay oo aad tidhaahdaa annaga waxay u egtahay inaad u baahan tahay daaweyn dhamaystiran oo ay weheliso hagitaan tababar (doorbidayaa horeba shalay!) - Haa, waxaad si fudud ugu baahan tahay "adeeg buuxa". Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto nafaqeeyaha kiliinikada (nafaqadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah jirka caafimaadka qaba), xanuunka loo yaqaan 'chiropractor' (chiropractor wuxuu sameyn karaa wax ka badan kala-goysyada wuxuuna kuu gudbin karaa baaritaan takhasus leh haddii loo baahdo), daaweeyaha gacanta, masseur ama physiotherapy (daaweynta jirka + jimicsiga). Haddii aad rabto, waxaan ka heli karnaa daaweeyaha lagu taliyey ee kuugu dhow.
Dheef-shiid kiimikaad hooseeya? Haddii lagugu caddeeyey shaybaadh dhiig - ma ogtahay inay tahay Hashimoto's thyroiditis syndrome ku saamaysay?
Ann C wuxuu leeyahay,
16/08/2016 at 13:58
Ma hubo in aan dhowr shay hal mar qaadi karo, tusaale ahaan meelo badan oo jirka ah oo aan xanuun ka dareemayo?
Markii laygu sheegay calool xanuunka Maajo 2015, aad baan u bukooday oo qaybo badan oo sariir ah ayaan jiifay sannad dhan ilaa hadda.
Waxaan leeyahay xuub dhuuban oo ku yaal daloolka afka iyo dildilaaca carrabka kaas oo markaa cuna oo guba marka wax cunayo. iyo sidoo kale qanjidhada candhuufta oo barara iyo cirridka oo la baxay. tani waa mid dhib badan waxayna si weyn u yaraynaysaa tayada nolosha. Waxa uu ka lumay rabitaanka cuntada ee la xidhiidha UC waxana uu lumiyay 15 kg si ikhtiyaari ah 2015. waxa uu helay dhowr kiilo mar kale dadaal badan ka dib.
Waxa kale oo aan marmar xanuun iga soo gaadhay gacmahayga iyo sinta iyo hooska bowdada ee yimaada oo taga. xanuunka joogtada ah ee garabka bidix kaas oo la soo jeediyay garabka barafoobay.
Su'aashaydu waxay tahay inta badan waxaas oo dhami ma ku iman karaan natiijada dhaqdhaqaaq la'aan, nafaqo xumo, miisaan lumis iyo sidoo kale UC?
waligeed la halgamin wax liddi ku ah nidaamka difaaca iyo caafimaadka oo aad u wanaagsan.
Aad baan ugu mahadcelinayaa jawaabaha ama sida aan u waydiiyo si ka duwan haddii aysan suurtogal ahayn habkan.
(Waxaa looga jawaabay email ahaan)
Nina wuxuu leeyahay,
01/02/2018 at 10:30
Hello. Waxaan la dhibtoonayay qoorta iyo cududda xanuunka iyo nuur ilaa farahayga ilaa 2 sano. MRI waxay muujisay xoogaa foorar iyo cidhiidhi ah hal neerfo oo ka baxa cududda aan ka dareemayo xanuunka. Tani waxay dejisay waqti ka dib, laakiin dhaqdhaqaaq yar ayaa si aad ah uga sii daraya. Gaar ahaan marka la maroojinayo/wareejinayo qoorta.
Dhawaan waxaa garabkayga iyo gacantayda MRI laga qaaday oo xanuunka ugu xanuun badan. Garabka waxaa jira barar dabadheeraad ah waxaanan ku hayaa qanjidhada ganglion ee curcurka (ma muuqato). Caabuqa ma keeni karaa calaamado la mid ah foorarsiga/soo dhicista?
Waxaan fahamsanahay in finanku ay u badan tahay inay ku cadaadinayaan dareemayaasha faraha. Ma helayaa rajo yar oo laga yaabo in qoortu aysan aad u xunayn?
Fiix waxaa lagu samayn karaa wax, iyo dhammaan xanuunka aan ka takhalusaa waa wanaagsan yahay =) cudud gebi ahaanba waa wax aan faa'iido lahayn mararka qaarkood. Waxyaabaha maqan, ma qaadan karaan bacaha wax iibsiga iwm. Timaha dhaqida / cadayashada timaha waa aragti. 24/7 aad bay u xanuunaysaa. Ma garanayo inay khusayso iyo in kale, laakiin waxaan leeyahay unug isku xidha oo "jaban", waxaana la malaynayaa inaan ahay hypermobile (adoo aan wax faa'iido ah i siinin) waxaa la ii gudbiyay ganglion-yada mtp, laakiin garabka waxba kuma laha.
Grethe wuxuu leeyahay,
Labada xaaladoodba, labadaba dhibaatooyinka qoorta iyo fiilooyinka, neerfayaasha ayaa la isku dhejin doonaa. Sidaa darteed uma badna in sawirka xanuunku uu isku dul dhaco ama uu bixiyo xanuun siman. Runtii ma aad arki kartid waxa ay yihiin ilaa lagaa daaweeyo fiixaha. Dhibka ka saar oo arag waxa ka hadhay xanuunka. Dhibaato isku mid ah ayaa ku haysa cudurrada is-daba-jooga. Ma garanayo xanuunnada ay leeyihiin cudurka.
PS - Iyadoo la tixgelinayo in xanuunku uu inta badan joogo inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa, waxa kale oo cad in ay jiraan qaar ka mid ah ku lug lahaanshaha dhibaatooyinka wadajirka ah iyo xanuunka muruqa ee sawirka.
Veronika wuxuu leeyahay,
Hello. Waxay hadda jawaab ka heshay MRI garabka bidix oo qallafsan oo xanuunsan ku dhawaad ​​hal sano. Wuxuu dhaawac u geystaa seedaha iyo jeexjeexyada (dillaac), oo aad ugu xoog badan kaabsulka wadajirka ah. Oo lagu daray xirashada iyo dildilaaca. Ma jiraa qof ka war haya ama lagu sameeyay tan? Waxaa loo gudbiyaa dhakhtarka lafaha.
Kinesiotape ee daaweynta xanuunka garabka / garabka. Vondt.net | Waanu kaa khafiifinaynaa xanuunkaaga. wuxuu leeyahay,
11/07/2014, kl. 18:27
Naasaha waaweyn miyay wax yeeli karaan dhabarkaaga? Naaso waaweyn, ama naaso waaweyn Vondt.net | Waanu kaa khafiifinaynaa xanuunkaaga. wuxuu leeyahay,
29/08/2013, kl. 14:14